यो साताको लभ राशिफल, कुन राशिको भाग्य कस्तो ? हेर्नुस – Rapti Khabar
सबै मानिसको जीवनमा प्रेम अनुकुल नहुन सक्छ । यस अलावा राशी अनुसार पनि मानिसको प्रेम निर्धारित हुने गर्दछ । जस अनुसार यो साता कुन राशीका लागी प्रेमका लागी अनुकुल छ ?
हेर्नुहोस् राशी अनुसारको फल
यो साता मेष राशीका ब्यक्तिका लागी सम्बन्धको दृष्टिकोण सकारात्मक रहने छ । अन्य दिनभन्दा प्रेम जीवन घनिष्ठ हुनेछ । यस अलावा तपाईको पुरा ध्यान घर परिवार प्रति केन्द्रित हुनेछ ।
वृष राशीका ब्यक्तिका लागी सम्बन्ध प्रति केहि सचेत हुन आवश्यक छ । आफ्नो रीसमा नियन्त्रण पाउन र कुनै पनि गलत मानसिकता त्याग्न जरुरी हुन्छ । अन्यथा प्रेम जीवनमा दरार आउन सक्छ ।
मिथुन राशीका ब्यक्तिको मन प्रेमका बिषयमा बिचलित हुनेछ । सम्बन्धमा खासै सुधार नआउने भएकाले हरेक चिजमा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । यो साता मानसिक तनावमा घेरीनु पर्ने हुनसक्छ ।
घर परिवारका प्रति समर्पण बढ्ने दिन भएकाले कर्कट राशीका ब्यक्तिका लागी स्वतः जीवन साथीद्वारा सुख प्राप्त गर्ने समय रहेको छ । तर कुनै पनि नकारात्मक विचार नपाल्नुहोला यसले भने घाटा पुर्याउनेछ ।
सिंह राशीका ब्यक्तिको ध्यान पुर्णत आज कर्म र परिवार प्रति रहनेछ । घरका सबै समस्या समाधान गर्ने मनसाय राख्ने यस राशीले प्रेमका लागी समय छुट्याउन आवश्यक छ । रिसमा नियन्त्रण गरी प्रेमीलाई साथ दिनुहोला ।
कन्या राशीका ब्यक्तिले सम्बन्धमा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाइराख्न आवश्यक छ । साना तिना कुरामा रिसाउन छाडेर जीवनसाथीलाई सुख दिएमा सहजै उबाट सुख प्राप्त हुने योग छ । बोलीमा ध्यान पुर्याउनुहोला ।
तुला राशीका ब्यक्तिका लागी यो साता लाभाकारी हुनेछ । जीवनसाथीद्वारा सहयोग मिल्नाले प्रेममय समय बन्नेछ । आपसी समझदारीमा परिवार र सन्तान प्रति ज्यादा जागरूक हुने र निर्णय लिने परिस्थिति बन्नेछ ।
वृश्चिक राशीका ब्यक्तिका लागी यो साता प्रेममय बन्ने र सम्बन्ध प्रगाढ़ हुने समय छ । तर प्रेमी प्रति ध्यान बनाई राख्न आवश्यक छ । अन्यथा कुनै पनि कारणले सम्बन्ध बिग्रन सक्छ ।
धनु राशीका ब्यक्तिले आफ्नो वाणीमा नियन्त्रण राख्न जरूरी छ । क्रोध वा उत्तेजनामा आएर कुनै पनि बिषयमा नबोल्नु होला अन्यथा प्रेम जुट्ने भन्दा फुट्ने समय छ । यो प्रेमका लागी अनुकुल समय होइन ।
जीवनसाथीका साथसाथ अन्य सम्बन्धमा पनि यो समय प्रेमका लागी अन्य समयभन्दा विशेष समय हो । घर परिवारका सबै चिन्ता कम गर्न जीवनसाथीको पूर्ण सहयोग आवश्यक हुन्छ जसका लागी तपाई रोमान्टिक बन्न आवश्यक छ ।
जीवनसाथीका साथै अन्य सम्बन्ध तुलानात्मक रुपमा अन्य समयभन्दा अनुकुल छ । तर परीवार प्रति बढि ध्यान केन्द्रित हुने भएकाले जीवनसाथीसंगको प्रेममा कमी आउनेछ । यो ब्यालेन्स बनाउन तपाईको सुझबुझ आवश्यक छ ।
मीन राशीका ब्यक्तिका लागी यो साता परिवार प्रति समर्पण भाव हुने योग छ । सानातिना बिषयको तनाव झेल्नु परेपनि जीवनसाथीसंगको सम्बन्ध भने घनिष्ठ हुनेछ ।
यो साता हराएको आत्मविश्वास जाग्नेछ । नयाँ सम्बन्ध स्थापित हुनेछ । प्राविधिक कार्यबाट अधिक सफलता मिल्नेछ । वैदेशिक कार्य सहजै अघि बढ्नेछ । व्यापार तथा सेयर कारोबारमा रुचि बढ्नेछ । गरेका कामबाट राम्रै लाभ हुनेछ । धर्म,कर्म तथा समाजसेवामापनि मनलाग्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ५,८ र शुभरङ्ग खैरो वा रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व शिवजीको दर्शन वा स्मरण गरी कार्य आरम्भ गर्दा राम्रो हुनेछ ।
यो साता शुभ कार्यको लागि यात्रा हुनेछ । वित्तिय संस्थाबाट सहयोग पाईनेछ । आफूसँग भएको क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर जुट्नेछ । नयाँ काम वा रोजगारको अवसर मिल्नेछ । धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । बुधवारबाट कामहरू अधुरै रहलान् । लगानी डुव्ने भय छ अत: सचेत रहनु होला । यो साताका लागि शुभअङ्क २,७ र शुभरङ्ग हरियो हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि विष्णुभगवानको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा लाभ मिल्नेछ ।
यो सातामा समस्यापूर्ण र बेफाईदाका यात्रा हुनसक्छ । सौन्दर्यतामा धन खर्च होला । प्रेममा मनमुटावका साथै मन कमजोर रहला । साताको अन्त्यबाट नयाँ कार्यको योजना बन्नेछ । मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह छाउला । साहित्यिक क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,७ र शुभरङ्ग हरियो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि भैरवजीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा बढी सफलता मिलन सक्छ ।
यो साता धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अवसर मिल्नेछ । रोकिएका कार्य पुन: प्रारम्भ हुनेछन् । कूटनीतिक नियोगको सहयोग मिल्नेछ । वैदेशिक क्षेत्रबाट सफलता र रमाइलो यात्रा हुनेछ । साताको अन्त्यमा भने आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि केहि संघर्श गर्नु पर्ला । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,७ र शुभरङ्ग पर्पल हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि शिवजीको पूजा अर्चना गरि गरेको कार्यबाट सफलता मिल्नेछ ।
यो साता नयाँ वस्त्र, अलंकारको प्राप्ति हुनेछ । चिताएको कामले तीव्रता लिनेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । वैदेशिक कार्य अघी बढ्नेछ । शरीरमा स्फूर्ति र उमङ्ग छाउनेछ । वाक्चतुर्याईँले सङ्कल्प सिद्ध हुनेछ । प्रेम सम्बन्ध कसिलो रहला साथै पुनर्मिलनको योगपनि रहेको छ । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,६ र शुभरङ्ग घ्यूरङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु अघि हनुमानजीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
यो साता बन्धु बान्धवबाट सहयोग मिल्नेछ । धार्मिक तथा शुभकार्यको लागि यात्राको योग रहेको छ । एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । कलकारखाना र बन्दव्यापारमा विस्तारै फाइदा हुन थाल्दछ । यो साताका लागि शुभअङ्क २,४ र शुभरङ्ग हरियो वा गुलाबी हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि महासरस्वतीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
यो साता भाग्यले विभिन्न अवसर जुराउनेछ । शुभ समाचार सुन्न पाइएला । कला,साहित्य तथा संगीतमा रुचि बढ्नेछ । आफन्त संग भेटघाट हुनेछ । नयाँ अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । साताको मध्यमा नियमित खर्च बढ्ने योग छ । शरीरमा स्फूर्ति र उमङ्गमा कमी आउनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,७ र शुभरङ्ग सेतो वा हरियो हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि भैरवजीको स्मरणगरी कार्य आरम्भ गर्दा शुभफल मिल्नेछ ।
यो साता एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् र नयाँ कार्यको योजना बन्नेछ । लामो समयपछि आफन्तसंग भेटाघाटा हुनेछ । विद्या र बुद्धिको विकास हुनेछ । शुभ कार्य, यज्ञयज्ञादि तथा धार्मिक कृत्यमा विशेष सहभागीताको अवसर पनि मिल्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,९ र शुभरङ्ग सुन्तला हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व पुरुषोत्तम भगवानको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा सफलता मिल्नेछ ।
यो हप्ता नयाँ–नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । धर्म,कर्म तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । चिताएको कामले तीव्रता लिनेछ । पुनर्मिलनको योग रहेको छ । व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ । बोलीको प्रभाव पनि बढ्नेछ । शुभकार्यको चर्चापनि चल्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क २,९ र शुभरङ्ग सुन्तलारङ्ग वा सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु अघि मान्यजनको आशीर्वाद लिएर कार्य गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो सातामा शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । शैक्षिक क्षेत्र र प्रतिस्पर्धामा सफल भाईनेछ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरु पत्ता लाग्नेछन् । विशेष यज्ञयागादि तथा धार्मिक कृत्यमा सहभागीको अवसर पनि मिल्नेछ । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,९ र शुभरङ्ग निलो वा रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि भैरवजीको स्मरणगरी कार्य आरम्भ गर्दा सफलता मिल्नेछ ।
यो सातामा नयाँ काममा हात हाल्नुअघि राम्ररी विचार पुर्याउनु होला । विश्वास पात्रले भाषा परिवर्तनले मनमा दुविधा उत्पन्न हुन सक्छ । गाडी चलाउँदा वा यात्रागर्दा सावधानी अपनाउनु नै पर्नेछ । साताको अन्त्यमा मनोरञ्जन र रोमाञ्चक यात्राको योग छ । नयाँ कार्यको योजमा पनि बन्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ५,७ र शुभरङ्ग कालो वा खैरो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व दुर्गाजीको स्मरण गरी कार्य आरम्भ गर्दा शुभफल प्राप्त हुनेछ ।
यो हप्ता कला र गलाको प्रभाव बढ्नेछ । बोलीको भरमा कार्य सम्पादन हुनेछ । व्यापार तथा सेयर कारोबारमा रुचि बढ्नेछ । मंगलवारबाट घरायसी वातावरणमा केही असामान्यता देखिन सक्नेछ । गरेका कार्यमा ढिलासुस्ती हुनेछ, तर अभिभावकको आशीर्वादले काम गर्नसक्छ । यो साताका लागि शुभअङ्क २,९ र शुभरङ्ग सेतो वा सिन्दूरे हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि नवग्रहको स्मरणगरी कार्य आरम्भ गर्दा राम्रो हुनेछ ।
सबन्धलाई मानिसहरु मुठ्ठीभित्र रहेको पुतलीसँग तुलना गर्छन् । मुठ्ठी बेस्सरी कस्नुभयो भने पुतली मर्छ, खोल्नुभयो भने उडेर भाग्छ । सम्बन्ध पनि त्यस्तै हो, एक – अर्कालाई केरकार बढी गरियो भने भित्रभित्रै सम्बन्धमा चिसोपना आउँदै जान्छ भने स्वतन्त्र छोडिदियो भने कता पुगिसक्छ थाहा नै हुदैँन । त्यसैले जीवन जति संवेदनशील छ सम्बन्ध पनि उत्तिकै छ । […]